Inkontileka yokuthengisa phakathi kwabantu, ngesibonelo esicacile | Ezezimali Zomnotho
USusana Maria Urbano Mateos | | Ikhaya, indawo yokuhlala
Isivumelwano sokuthengisa phakathi kwabantu eSpain, ichazwa ngokuya ngemibandela ye-athikili 1445 ye-Civil Code. Kumisa ukuthi kuyinkontileka lapho kunezibopho zokuphindisela kumaqembu amabili enza isivumelwano. Kulolu hlobo lwenkontileka, umthengisi ubophezelekile ukuletha into ethile, kanti yena, umthengisi ubophezelekile ukuthi akhokhe inani elithile, kungaba ngokheshi, noma uphawu olumele.
1 Izici zenkontileka yokuthengisa
2 Yiziphi izakhi esivumelwaneni sokuthengisa phakathi kwabantu ngabanye?
2.3 Ukudluliswa kobunikazi
4 Yenziwa kanjani inkontileka yokuthengisa phakathi kwabantu?
5 Kusho ukuthini ukuqedwa kwenkontileka yokuthengisa?
Izici zenkontileka yokuthengisa
Kuwo wonke umlando, i- ukuthengisa kube ngesinye sezibalo ezibaluleke kakhulu zenkontileka, ngoba kuyithuluzi elisemthethweni elisetshenziselwa ukuhweba ngempahla, kubaluleke kakhulu ekuhlelweni kwezenhlalo nezomnotho. Kumele kushiwo ukuthi ukulawulwa kwenkontileka yokuthengisa ku-Civil Code kubanzi futhi kuncane ngokwemibandela yobuchwepheshe. Ngenxa yesikhathi okwabhalwa ngaso i-Civil Code, izindaba eziningi ezibaluleke kakhulu ezichazwe kule khodi zithathwa njengezinto zesikhathi esedlule noma esezenzekile nangesikhathi esingasasebenzi.
Ezinye ze izici zenkontileka yokuthengisa phakathi kwabantu ngabanye kufaka:
Kungumqulu ozimele ngoba awuxhomekile kwezinye izinkontileka
Ngaphezu kwalokho, kuphoqelekile ngoba kuchaza izibopho zokuphindisela: ngakolunye uhlangothi, umthengisi kufanele athengise impahla noma impahla, kanti ngakolunye uhlangothi, umthengi kufanele akhokhe inani okuvunyelwene ngalo.
Le nkontileka yokuthengisa nayo iyacatshangelwa, okungukuthi, kukhona ukunothisa noma ukushintshaniswa kwezimpahla phakathi kwalabo abathintekayo ngenxa yezibopho ezisunguliwe.
Akugcini lapho, futhi kuyinkontileka evumayo, ngakho-ke kuyadingeka ukuthi izinhlangothi zombili zivume.
Inkontileka yokuthengisa ibuye ibonakale ngokuba nefomu lamahhala, okusho ukuthi lingenziwa ngokubhala noma ngomlomo, ngaphandle kwalapho kukhulunywa ngokuthengiswa kwempahla, lapho inkontileka kufanele yenziwe ngokubhala .
Inkontileka yokuthengisa nayo iyashintsha, ngakho-ke kunesibopho sokukhokha intengo yomthengi, kanye nesibopho sokuletha into yomthengisi, izici ezimbili ezilinganayo ngokuyisisekelo. Lesi sici sibalulekile ngoba siyadingeka ukuhlukanisa lokho kuthengisa okulingisiwe okusetshenziselwe ukufihla iminikelo ngenkohliso kubabolekisi.
Yiziphi izakhi esivumelwaneni sokuthengisa phakathi kwabantu ngabanye?
Okuqukethwe kwenkontileka yokuthengisa phakathi kwabantu ngabanye kunokuqukethwe okusemthethweni nokusemthethweni, ngoba isibalo sayo sesivumelwano sifakiwe ngaphakathi kwesigaba sezinkontileka ezichazwe njengokujwayelekile noma okuphakanyisiwe. Ngale ndlela, into engaba khona icacisiwe, ngaphezu kokucaciswa kwezimpawu zentengo kanye nokulawula zonke lezo zibopho ezivela kulabo abathintekayo.
Kubalulekile ukucacisa ukuthi umthethonqubo oshiwo ngokuvamile uqukethe isethi yezinkambiso ezine- umlingiswa wentela nokuthi bangaba nokungenzi okuthile ngenxa yomgomo wokuzibusa kwentando, ezimeni eziningi okuyizinto ezibekiwe, yize labo abathintekayo bengazisho, ezingasuswa noma ziguqulwe ngentando izingxenye.
Kwezinye izimo, izinkambiso eziyimpoqo ziyasungulwa ezingasuswa noma ziguqulwe ngokuthanda kwalabo abathintekayo. Ngaphandle kwalokhu, bayingcosana esibalweni senkontileka, njengoba kwenzeka emthethweni wangasese.
Laba ngabanikazi abanamalungelo nezibopho zokubuyisa. Endabeni yesivumelwano sokuthengisa, izifundo zibhekwa njengomthengi nomuntu okweletayo. Kufanele kushiwo ukuthi akunasimo lapho kufanele amagama ezihloko akhishwe esivumelwaneni sokuthengisa.
Ku-a inkontileka yokuthengisa into ngokuyisisekelo izinto noma izimpahla ezizodluliswa ngomsebenzi wezomnotho. Izinto ezishiwo zingaba ezibonakalayo noma ezibandakanya.
Ukubambisana noma ukuhlanganisa. Lokho kusho ukuthi, kufanele kungabi nandaba uma inkontileka inento yayo, impahla ethile ebonakalayo noma uma, ngokuphambene nalokho, isebenza ngamalungelo wokuhlanganisa.
Okwamanje noma okuzayo. Kulokhu, ngoba kuyimpahla yamanje noma ngenye indlela, inkontileka ingaba nempahla yesikhathi esizayo njengenhloso yayo.
Ngaphandle kokuba omunye we izinto eziyinhloko zesivumelwano, Futhi kungenye yezibopho ezinkulu ezinikezwe kuyo. Ngakho-ke, usuku okuzodluliswa ngalo impahla noma okuhle kuzofakwa kusivumelwano sokuthengisa. Ngale ndlela, isibopho ngasinye sesisetshenziswa kuzofanele futhi ukuthi sixolelwe.
Le nto kufayela le- inkontileka yokuthengisa futhi ingenye yezibopho ezibaluleke kakhulu, ngakho-ke inani kufanele lifakwe ngenkani kwinkontileka. Intengo okufanele ikhokhwe nayo kufanele ibe yeqiniso futhi inqume. Kufanele ibe nemali noma uphawu oluyimele. Uma le nto eyisisekelo ingafinyelelwanga, izinzuzo zalabo ababandakanyeka ekulethweni kwento ethile kungaba ukuhweba.
Kubalulekile ukucacisa ukuthi empeleni akubalulekile ukucacisa inani lemali ngaleso sikhathi okwenziwa ngalo inkontileka, inqobo nje uma ukuzimisela kobuningi kushiyelwa enkululekweni yokuzikhethela yelinye lamaqembu. Ngakolunye uhlangothi, uma ukunqunywa kwenani elizokhokhwa kuyisinqumo somuntu wesithathu futhi kungacaciswanga ngesikhathi sokwenza isinqumo, inkontileka ngeke isebenze.
Okwamanje kufanele kuthiwe umuntu wesithathu uzokwenza ngokulinganaKodwa-ke, isinqumo sakho singaphonselwa inselelo uma ungawusebenzisanga lo mgomo. Kwenzeka into efanayo uma lowo muntu wesithathu engazange alandele izinkomba ezisungulwe yibo bobabili ababenenkontileka.
Yenziwa kanjani inkontileka yokuthengisa phakathi kwabantu?
Inhloso yokwenza isivumelwano sokuthengisa phakathi kwabantu kuhlobene neqiniso lokuthi zonke izinto zenkontileka yalolu hlobo kufanele ziqoshwe, okungukuthi, izihloko, into, intengo nezibopho.
Lapho uqala nge ukubhala inkontileka yokuthengisaKonke kuqala ngesihloko sedokhumenti futhi ngemuva kwalokho kuhlonzwe iqembu ngalinye. Kuyadingeka ukuthi ucacise igama, umazisi, kanye nekheli lomthengi nomthengisi.
Okulandelayo, siqhubeka nokuchaza ngokuningiliziwe ngangokunokwenzeka, okuhle noma into ezodluliselwa. Endabeni ye-real estate, umthwalo uzobe usuba mkhulu ngoba yonke imisebenzi efana nogesi, amanzi, ukuthuthwa kwendle, phakathi kokunye, kuzodingeka icaciswe, kanye nokucaciswa kwezimo lapho impahla ikhona njengamanje.
Ngemuva kwalokhu okungenhla, kufanele kuchazwe zonke izibopho zenkontileka, ezibandakanya, ukudluliswa kokuhle nokukhokhwa kwentengo yokuhle. Mayelana nokudluliswa kwempahla, inkontileka kufanele imise ngokusobala usuku lapho impahla izothunyelwa khona. Ngenhlonipho ku ukukhokhwa kwentengo yokuhle, Kuyadingeka ukuthi ucacise inani lentengo yokuhle, kanye nendlela yokukhokha.
Ekugcineni, inkontileka kufanele isayinwe yilabo abathintekayo futhi, uma kunesidingo, bayiphakamisele itayitela lomphakathi.
Kusho ukuthini ukuqedwa kwenkontileka yokuthengisa?
Kungumqondo owethulwa ngemuva nje kokuba kunikezwe noma yisiphi isizathu sokuxazululwa. Ngokungafani nokwenzekayo ngokungabi nalutho, i-Civil Code ayizilawuli izimbangela ezithile ezihlobene ne- ukulungiswa kwesivumelwano.
Isenzo sesinqumo Kungumsebenzi walowo obolekayo futhi ngenxa yalokho, isizathu esivame kakhulu sokunqanyulwa kwenkontileka ukungafezeki kwanoma yiziphi izibopho ezitholwe kwinkontileka uqobo lwayo. Uma kwenzeka ukuthi inkontileka yokuthengisa ingenziwa ngenxa yokungakhokhi, umbolekisi uzoba nelungelo eligcwele lokufuna isinxephezelo ngokuya ngemibandela ye-Civil Code.
Kukhona futhi kungenzeka ukuthi kuvele esinye isizathu sokuqedwa lapho ukuthengisa kwenziwa ngesampula. Uma lokhu kwenzeka, umbolekisi uzoba nelungelo lokunqamula inkontileka eshiwo lapho kunqunywa ukuthi ikhwalithi yokuhle yehlukile kuleyo enikezwa kusampula.
Yize kuliqiniso ukuthi sichaze kabanzi indlela a isivumelwano sokuthengisa phakathi kwabantu, izinto okufanele zifakwe kanye nezibopho zeqembu ngalinye elibandakanyekayo, lokhu akusho ukuthi ummeli kufanele anikezwe. Into ebaluleke kunazo zonke ukuphendukela kummeli oyingcweti kwizivumelwano zokuthengisa ukuze akwazi ukuxazulula noma ikuphi ukungabaza futhi anikeze izeluleko hhayi kuphela maqondana nokubhalwa kwazo, kepha futhi nezinye izici zomthetho.
(Ifayela elihlanganisiwe) Isibonelo senkontileka yokuthengisa ezwini
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Ilondoloza » Ikhaya » Inkontileka yokuthengisa phakathi kwabantu ngabanye